एमालेको नक्कली राष्ट्रवादबाट सचेत हुनुपर्छ : कोइराला
सिरहा, २६ भाद्र । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेकपा एमालेको नक्कली राष्ट्रवादबाट सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमालेको नक्कली राष्ट्रवादको नाराले मधेश र पहाडबीच सामाजिक सद्भाव विथोलिने आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस सिरहा नगर समितिले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले यस्तो आरोप लगाएका छन् ।
साथै, उनले एमाले र मधेशी दल मिति सकिएको औषधी जस्तै भइसकेको दाबी गर्दै यी दलहरूले अब मधेश र मधेशीको हितमा काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले मधेशको समस्या कांग्रेसले मात्रै समाधान गर्न सक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।